Agasti 21, 1977 wazalwa ekukhanyeni intombazane. Ngaleso sikhathi, akekho wayengase acabange ukuthi ukuba intokazi, yena ngokushesha okukhulu impumelelo ibhizinisi esiteji futhi show. Yaqala kanjalo biography Anny Pletnevoy - singers band "Vintage" kuze kube manje.
ukucula umsebenzi wakhe, waqala ngokusemthethweni ngo-1997, lapho intombazane trio odumile we sikhathi, "High School" ibekelwe Elena Perova. Yiqiniso, amandla akhe lamaqembu Anna wazama emibuthanweni ehlukahlukene, ekhuluma enkundleni esikoleni, kanti basola isifiso sakhe enkazimulweni ngokwakhe waba uVladimir ng. Le ndaba yaqala ngo zisencane, okuyinto yena akhuleka Thixo wakhe. umzalwane-Anna ukuthi ngandlela-thile ngomlingo uthole umbhalo wesandla umculi kuye, futhi kwaba fan zakhe ezizinikele usuhlale iminyaka eminingana. Namuhla, ngekhanda yakhe kwakukubi kuphela usuku uthuli ephepheni.
Biography Anna Pletnev ebonisa ukuthi ngemva kweminyaka eminingi, wahlangana nge ebuntwaneni uthando lwakhe, bese bema ndawonye enkundleni kokubili nozakwethu nabangane.
Iminyaka komsebenzi ithimba okudala "High School" waletha umculi osemusha imiklomelo eminingi, imiklomelo nothando elingenakuqhathaniswa abalandeli bakhe, abasekela futhi idolize enhle yabo kuze kube namuhla. Biography Anna Pletnev asibonise izenzakalo 2006, okuyinto eyaba juqu impilo yakhe. Sekuyisikhathi eside kucatshangwa mayelana eqala umsebenzi wakhe solo, kodwa lapho ensimini ka-Ukraine orange revolution uqalile, kanye neqembu "High School" okwadingeka ukuba ngiyokhuluma ngazo ekusekeleni eyodwa kodwa ngabaholi bezombusazwe, wamane wala waxoshwa ngoba.
Mangisho ukuthi kwaba impumelelo yomcimbi kuMariya, ngoba yena ekugcineni wakwazi ukubonakalisa babuthane band lakho siqu ngokuthi "Vintage". umlingani wakhe ukuthi usuku Alexei Romanov, yangaphambili phambili umculi "A-Mega" futhi wengoma abaculi abaningi wesimanje. Futhi ngaleso sikhathi iqembu sivunyiwe umdansi Maya.
Biography Anna Pletnev ocebile imicimbi kanye empilweni yangasese. Ngo-2003, lo oculayo washada futhi ngokushesha wabeletha indodakazi, uBarbara. Ngesikhathi esifanayo ekhulelwe is engazivimbeli enhlanganweni izinhlelo zokudala. Wabuye aqhubeka bezobuka, waya esibhedlela endaweni yesehlakalo cishe. Ngeshwa, umyeni wami, engenakukwazi ukuma umthwalo omkhulu wemfanelo, futhi ngemva nje kokuzalwa kwendodakazi yakhe washiya umndeni. umyeni Okwesibili avela kuye lo oculayo baba usomabhizinisi, umnikazi Kirill Syrov inkampani eyenza imithi. Inguyise izingane ezimbili, Anna - kule nomshado, umculi ozalwa Indodakazi yesibili nendodana.
Namuhla, ngokuvamile emashadini isilinganiso ungabona ukuthi isikhundla ekuholeni elalihlala iqembu "Vintage". Anna Pletnev, ogama biography kuqinisekisa uhlamvu yayo inamandla nangokuzimisela, waba soloist leqembu, baduma ngenxa ngaphezu kwesikhathi esisodwa, "Lyceum". Ayiphethe konke: ukuba umama onakekelayo, enothando, actress ethandwa futhi owesifazane ebukekayo, lapho izigidi elihlanyiswa abalandeli!
Abantu abaningi owabonayo kuthelevishini esiteji, efikayo engqondweni umbuzo owodwa kuphela: "? Uneminyaka emingaki Anna Pletnev" Lapho impendulo kuba sobala ukuthi akunamkhawulo kujabule abalandeli. Futhi ngempela ubukeka amazing kanye ifomu olukhulu umculi futhi ongumama wezingane ezintathu babangela kuphela ukuhlonipha!
Esiteshini umculo umsakazo Modern. Usezingeni engcono ethandwa kakhulu
Putorana Reserve. Okubekiwe we Krasnoyarsk Territory